Peptide nke Bovine Collagen
Peptide na -akụ ahịhịa
Peptide Azụ Azụ
Cod Azụ Collagen Peptide
Azụ Oligopeptide nke Mmiri
Peptide Oké Osimiri
Ntụ ntụ oyibo
Mango ntụ ntụ
Ntụ ntụ oroma
Wayo ntụ ntụ
Lemọn ntụ ntụ
Mkpụrụ osisi dragọn
Ntụ ntụ Guava
Ntụ ntụ Gourd dị ilu
Ginger ntụ ntụ
Ntụ ntụ nke karọt
Otu esi amata ogo collagen peptide ntụ ntụ
Ka anyị na -aka nká, collagen ga -eji nwayọọ nwayọọ funahụ, nke na -akpata peptides collagen na ụgbụ na -agbanwe agbanwe nke na -akwado akpụkpọ ahụ ka ọ gbajie, anụ ahụ anụ ahụ ga -abụkwa oxidize, atrophy, ọdịda, na nkụ, ntụpọ na ịtọghe ga -eme. Yabụ, ịgbakwunye peptide collagen bụ ụzọ dị mma maka mgbochi ịka nká ...
Kedu ihe kpatara peptide collagen nwere ike iji meziwanye ihe mgbochi mmadụ?
Site na mmepe ngwa ngwa nke sayensị ọgwụ ọgbara ọhụrụ, ekwesịrị ibelata nje na ọrịa na usoro iwu, mana ọnọdụ ahụ dị n'amaokwu. N'ime afọ ndị na -adịbeghị anya, ụdị ọrịa ọhụrụ apụtala ugboro ugboro dịka SARS, Ebola, nke na -emebi ahụike mmadụ oge niile. N'oge a, enwere ...
Ọrụ nke obere peptide na -arụ ọrụ
1. Kedu ihe kpatara peptide nwere ike isi meziwanye nhazi nhazi nke eriri afọ yana ọrụ nnabata? Ahụmịhe ụfọdụ na -egosi na obere peptide molekụla nwere ike iwelie elu villi intestinal ma gbakwunye mpaghara mmịkọ nke mucosa eriri afọ iji kwalite mmepe nke obere eriri afọ yana ...
Ngwaahịa Nlekọta Ahụike Huayan Collagen
site na nchịkwa na 21-06-16
Na Mee 29, 2021, Maazị Guo Hongxing, onye isi oche nke Hainan Huayan Collagen Technology Co., Ltd., na Maazị Shi Shaobin, onye guzobere Guangdong Beiying Fund Management Co., Ltd., Nwere nzukọ azụmaahịa iji kwurịta imekọ ihe ọnụ nke ahụike. ụlọ ọrụ iji mepụta usoro ọhụrụ. Guangdong Beiying Fund Managemen ...
Kedu ihe kpatara mgbakwunye peptides azụ
Enwere 70% ruo 80% nke akpụkpọ ahụ mmadụ nwere collagen. Ọ bụrụ na agbakọọ dabere nha nke nwanyị toro eto nke dị kilogram 53, collagen dị n'ahụ dị ihe dị ka kilogram atọ, nke ya na nha karama mmanya 6 dị. Na mgbakwunye, collagen bụkwa ntọala ntọala nke ...
Mmetụta na ọrụ nke peptide ukpa
Iji hydrolysis enzymatic hydrolysis complex na biotechnology ndị ọzọ nwere ọtụtụ ihe iji mepụta walnuts a maara nke ọma dị ka "ọla edo ụbụrụ", wepu oke mmanụ na walnuts, wee nụchaa nri ha nke ọma, na-eme ọgaranya n'ụdị ụdị amino acid 18, vitamin na mineral. ...
Obere peptide molekul bụ isi nri maka ahụike na narị afọ nke 21
Peptides bụ ihe mejupụtara mkpụrụ ndụ niile dị n'ahụ mmadụ. Ihe na -arụ ọrụ nke ahụ mmadụ dị n'ụdị peptides, nke bụ ndị na -esonye dị mkpa maka ahụ iji rụchaa ọrụ ahụ dị mgbagwoju anya. A na -akpọkarị Peptides na narị afọ nke 21, usoro ...
Mmetụta mmezi nke peptide na BPH ụmụ nwoke
Ọtụtụ ndị mmadụ na -arụ ọrụ oge ọrụ, na -amụ anya abalị, na -a drinkụ mmanya ma na -emekọrịta ihe, yana enweghị ntụrụndụ, yana ịnọdụ n'oche ogologo oge n'ọfịs, nke na -eme ka BPH nwee usoro ntorobịa. BPH bụ ihe a na -ahụkarị, ị maara ka esi ebute ya? Benpla Prostatic Hyperplasia (nke akpọrọ BPH) bụ ọrịa a na -ahụkarị ...
Ọrụ na ntinye nke peptide bovine
Nabata ọkpụkpụ bovine ọhụrụ na nchekwa na enweghị mmetọ dị ka akụrụngwa, wee jiri teknụzụ ịgbalite pancretin dị elu na teknụzụ ọgwụgwọ nnu dị ala, a na-etinye nnukwu protein molekul n'ime peptide collagen dị ọcha nke nwere ịdị arọ dị ala, na-agbaze ma na-adị mfe ...
Ị ma mkpa ọ dị peptide na -arụ ọrụ nke obere molekul?
N'ikwu eziokwu, ndị mmadụ agaghị adị ndụ ma ọ bụrụ na enweghị peptide. Nsogbu ahụike anyị niile bụ enweghị peptides. Agbanyeghị, site na mmepe ngwa ngwa nke sayensị na teknụzụ, ndị mmadụ ji nwayọọ nwayọọ mata maka mkpa peptide dị. Ya mere, peptide nwere ike ime ka ndị mmadụ nwekwuo ahụike, yana ...
Mmekọrịta dị n'etiti peptide na ọgụ
site na nchịkwa na 21-04-16
Enweghị peptide n'ime ahụ ga -ebute obere ọgụ, yana ọ dị mfe ibute ọrịa, yana oke ọnwụ. Agbanyeghị, site na mmepe ngwa ngwa nke immunology nke oge a, ndị mmadụ ejirila nwayọ mara maka mmekọrịta dị n'etiti nri peptide na ihe mgbochi. Dịka anyị siri mara, erighị ihe na -edozi ahụ peptide na ...
Kedu ihe kpatara anyị ji achọ peptides oge niile?
Dị ka ihe na -arụ ọrụ maka ịchekwa ndụ, peptides na -ekere òkè dị mkpa n'ịgbajujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujue na nri, yabụ ọ dị anyị mkpa ịnye peptide. Ahụ nwere ike zoo ụfọdụ peptides na -arụ ọrụ, agbanyeghị, na afọ dị iche iche na ọnọdụ dị iche iche, enwere peptides dị iche iche bụ ihe nchekwa ...
Copyright - 2010-20220: Ikike niile echekwabara.